गरिबी निवारण कोषका सात वटा गाडी नै गायब « Naya Page
कम्प्युटर, सोफा, कुर्सी, पंखा, हिटरदेखि टी–टेबलसम्मका एक हजार १५ जिन्सी सामान चोरी
प्रकाशित मिति :9July, 2020 6:02 am
काठमाडौं, २५ असार । गरिबी निवारणका लागि विश्व बैंक र सहयोगी दातृ निकायबाट आएको २९ अर्ब अनुदानबाट कति गरिबको जीवन उत्थान भयो भन्ने यकिन छैन । कोषले नै आफ्नै कार्यक्रमको अनुगमन गरेको छैन ।
तर, पदाधिकारी र कर्मचारीको जीवन उत्थान भएको मान्न सकिन्छ किनकि कोषको कार्यालयबाट पेनड्राइभ, ल्यापटप, कुर्सी, सोफा, ग्यास सिलिन्डर र हिटरदेखि मोटरसाइकल र गाडी समेत गायब भएका छन् ।
गरिबी निवारण कोषको आ.व. ०६२–६३ देखि ०७४–७५ सम्मको जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा जम्मा दुई हजार चार सय ३१ प्रकारका जिन्सी सामग्री रहेको रेकर्डबाट देखिन्छ । तर, तीमध्ये एक हजार १५ सामान कोषबाटै गायब गरिएको ठहर छानबिन समितिको छ । यसरी गरिबको नाममा आएको अनुदानबाट किनिएका चार करोड १४ लाख ७२ हजार दुई सय ४८ रुपैयाँका सामान कसले लग्यो ? यस विषयमा छानबिन समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
कोषका आर्थिक प्रशासन प्रमुख सुनील रिजालले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन नै गलत भएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘त्यतिवेला गलत रिपोर्ट भएको हो । आज किनेको सामान त भोलि हुँदैन भने ०६० देखिको अभिलेख राख्नु गाह्रो हुन्छ ।’
उनले गाडीहरू पनि नहराएको बताए । ‘हामीले दुईवटा गाडीमध्ये एउटा ओखलढुंगाको जिल्ला विकास समिति र अर्को फलेवास नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ भने एउटा मोटरसाइकल भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ,’ रिजालले भने ।
तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् छानबिन समितिका सदस्य बुद्धिराम खनाल । ‘प्राप्त तथ्य, प्रमाण र कागजातका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
यसलाई पुष्टि गर्न हामीले विभिन्न जिल्लाको स्थलगत भ्रमण पनि गरेका हौँ । यससँग सम्बन्धित सबै तथ्य, कागजात र प्रमाण केन्द्रसँग सुरक्षित छ । हचुवाका आधारमा छानबिन गरिँदैन, प्रतिवेदन बनाइँदैन,’ उनले भने ।
वैदेशिक अनुदानबाट कोष परिचालन गर्दा गरिबीको स्थितिमा परिवर्तन भयो कि भएन वा कार्यक्रमले गरिबलाई जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्‍यो कि गरेन भन्ने अध्ययनसमेत नगरी वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च गर्ने कार्यमा मात्र कोष अग्रसर भएको समितिको ठहर छ ।
आफ्नै कार्यक्रमको प्रभावकारिता अनुगमन नगर्ने मात्र होइन, बरु कोषभित्र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष बेरुजु रकम औंल्याए पनि फस्र्योट गर्नेतर्फ कोषले ध्यान दिएको छैन । यसरी पदाधिकारीका तर्फबाट मात्र २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २७ फागुन ०७१ मा कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजुबाबु श्रेष्ठसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठसहित कोषका नौजना कार्यप्रबन्धक, दुई लेखा अधिकृत, प्रशासन तथा वित्त प्रमुख र लेखा सहायक एक–एक जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०६६–६७ देखि ०६८–६९ सम्मको अवधिमा दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले ०७५ मा श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत गएका छन् । ‘विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध ६–७ महिना पहिले सर्वोच्च अदालतमा गएको छु, फैसला आउन बाँकी छ,’ उनले भने ।
कोषमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा अहिले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीलाई बयान गराउनेदेखि कागजातको अध्ययन भइरहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।
‘प्रमाण संकलन गरी पदाधिकारीको बयान लिने काम भइरहेको छ । भ्रमण नै नगरी टिकटको भुक्तानी दिने र नक्कली बिलहरूमा भुक्तानीको विषयमा गम्भीरताका साथ अनुसन्धान भइरहेको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट